ဗျာဒိတ်ကျမ်းနိဒါန်း - ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို နားလည်ရန် ဘုရားသခင် ရည်မှန်းထားသည့် အကြောင်းအရာအတွင်းသာ နားလည်နိုင်သည်။ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည် မှားယွင်းသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှု—မသေချာသောအသံတစ်ခု ထွက်လာလိမ့်မည်။ “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တံပိုးခရာသည် မသေချာသောအသံဖြစ်လျှင် စစ်တိုက်ရန် အဘယ်သူပြင်ဆင်ရမည်နည်း။ (၁ ကော ၁၄:၈) မသေချာသောအသံကို သင်လက်ခံရရှိပါက သင့်ဝိညာဉ်နှင့် စစ်မှန်သောတိုက်ပွဲသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း၊ ရန်သူသည် သင့်အား အနိုင်ယူမည်ကို သင်နားမလည်နိုင်ပါ။
ဆက်စပ်မှုကို “ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားသည့် အခြေအနေများ” ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဗျာဒိတ်တော်သည် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လေ့လာရုံသာမက၊ ဗျာဒိတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ “ဖြစ်ရပ်” ပတ်၀န်းကျင်ရှိ သင့်လျော်သောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများ လိုအပ်သည်- အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း စစ်မှန်သောရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဖြင့် ၎င်းကိုလက်ခံရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသည် ယေရှု၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ သူ၏စစ်မှန်သောအသင်းတော်၏ (“ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာ”၊ ယေရှု၏စစ်မှန်သောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။) ၎င်းသည် မှောက်မှားသောဘာသာတရားမှတစ်ဆင့် မာရ်နတ်သည် ဧဝံဂေလိတရား၏အမှန်တရားကို လှည့်ဖြားပြီး ရှုပ်ထွေးစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ထုတ်ဖော်ပြသသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ၀ိညာဉ်ရေးရာ အတိအကျ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ်မြင်ရသောအခါ ကိုယ်တော်အား ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုပုံနှင့်ပတ်သက်၍ လေးနက်သောရူပါရုံကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသပါလိမ့်မည်။
နားလည်မှုအတွက် သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာကို ပထမအခန်းတွင် ယေရှုက အပြည့်အဝသတ်မှတ်ထားသည်။ တကယ်တော့ ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာ သိလိုသမျှကို အခန်း ၁ မှာ ပြောပြထားပါတယ်။ တမန်တော်ယောဟန်သည် ယေရှုထံမှ မှန်ကန်သောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဤအောက်ပါအကြောင်းအရာများကို ဂရုတစိုက်သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဤတူညီသောဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများအတွင်း လေ့လာနေမည်ကို သေချာပါစေ။
ယေရှု၏ဗျာဒိတ်ကျမ်း - ပထမအချက်မှာ၊ အပိုဒ်ငယ် ၁ တွင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား ပေးဆောင်ခဲ့သော ယေရှု၏ ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အခြားမည်သူနှင့်မှ မသက်ဆိုင်ပါ။ ပြီးတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးပြီး ရောင်းစားရင် ဘယ်သူကမှ ငွေအများကြီးရှာပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ သင့်တွင် ထိုစာအုပ်အမျိုးအစားတစ်အုပ်ရှိလျှင် ၎င်းသည် လှည့်စားမှုများပါ၀င်သောကြောင့် ၎င်းသည် တန်ဖိုးမရှိသည်ထက် ပိုဆိုးကြောင်း စိတ်ချပါ။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို ဟောပြောရန် တပည့်တော်တို့ကို စေလွှတ်သောအခါ၊ “သင်တို့သွားသောအခါ၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် တည်လုနီးပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဖျားနာသောသူတို့ကို ချမ်းသာစေ၍၊ နူနာစွဲသောသူတို့ကို သန့်ရှင်းစေ၍၊ သေသောသူတို့ကို ထမြောက်စေ၍၊ နတ်ဆိုးတို့ကို နှင်ထုတ်လော့။ လွပ်လပ်စွာ ခံယူ၍ ပေးကမ်းကြလော့။” နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးသည် ၎င်းတို့အား စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် လက်ခံမည့်သူများကို ဘုရားသခင်က လွတ်လပ်စွာ ပေးဆောင်သည်။ မည်သူ့ကိုမျှ အခကြေးငွေယူရန် သို့မဟုတ် ၎င်းအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အကြွေးယူခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝိညာဉ်ရေးအရ ကောင်းမွန်သောအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပို့လိုက်ပါတယ်။ အားဖြင့် ကျွန် – အခန်းငယ် ၁ တွင် သခင်ယေရှုပေးသော ဗျာဒိတ်သတင်းကို ပေးဆောင်သည့် တစ်ခုတည်းသော တမန်/တရားဟောသူများသည် စစ်မှန်သော “ကျွန်” များဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်။ အစေခံသည် သူတစ်ပါးအကျိုးကို မဆောင်ရွက်ဘဲ၊ မိမိသခင်၏အကျိုးကို ဆောင်ရွက်တတ်၏။ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့အကျိုးစီးပွားတောင် မဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်သောကျွန်သည် ယေရှုကိုနာခံသည်၊ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် အပြစ်တရားနှင့် မာရ်နတ်၏တန်ခိုးကို လုံးလုံးလျားလျား ကယ်လွှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရှင်ဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်နှင့် တန်ခိုးတော်အားဖြင့်၊ သူသည် မိမိကိုယ်မိမိ နှိမ့်ချခြင်း၊ ဖြူစင်သန့်ရှင်းခြင်း၊ အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး စောင့်ရှောက်တော်မူ၏။ ယေရှု သူ့လက်ကိုသာ ချထားသည် နှိမ့်ချသော ဤကျွန်တို့သည် ကိုယ်တော်၏တရားစကားကို ဟောပြောခြင်းငှါ၊ ယေရှုက ဗျာဒိတ်သတင်းကို ပေးခဲ့တဲ့ ယောဟန်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့အချက်ဖြစ်လို့ ငါတို့လည်း ရနိုင်တယ်။ ယောဟန်သည် အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား လေ့ကျင့်ထားသည်၊ ယေရှုကိုမြင်သောအခါ “အသေကဲ့သို့ ခြေတော်ရင်း၌ နှိမ့်ချစွာ ပြပ်ဝပ်လေ၏။ ညာလက်ကို ငါ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။” ယောဟန်သည် သခင်ဘုရား၏ နှိမ့်ချသောကျွန်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ပို့လိုက်ပါတယ်။ ရန် ကျွန် – အခန်းငယ် ၁ က “ကျွန်များ” ဟူသော ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် မြေကြီးပေါ်ရှိ လူတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရည်ညွှန်းထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်၏ “ပိုင်သော” သူများ၊ သူတို့သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် သူ့ထံ ချည်နှောင်ထားပြီး၊ သူတို့သည် သူတို့၏ဘဝအတွက် ပန်းတိုင်များနှင့် အစီအစဉ်များအားလုံးကို သခင်ဘုရားနှင့် အရှင်သခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ကိုယ်တော်၏ကျေးကျွန်များအနေနှင့် ယေရှုကိုအစေခံခြင်းကြောင့်လည်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရကြသည်။ သို့သော် ယင်းက ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတွင် ယေရှု၏ သာ၍ကြီးကျယ်သော ဗျာဒိတ်တော်ရရှိစေကာ သာ၍ကြီးမြတ်သောနည်းဖြင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန်သာ ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်ယောဟန်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလက်ခံရရှိသောအခါ ပတ်မုတ်ကျွန်းတွင်ရှိနေသည်။ သူသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရပြီး စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုနေရာတွင် နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင်၊ သူသည် ထိုအရပ်၌ရှိစဉ်တွင် ကိုးကွယ်ဆဲဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ အခန်းငယ် ၉ နှင့် ၁၀ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောထားသည်။
“ငါယောဟန်သည် သင်တို့၏ညီဖြစ်လျက်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ၌လည်းကောင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နိုင်ငံတော်၌လည်းကောင်း၊ သည်းခံခြင်း၌လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏သက်သေခံချက်အတွက် ပါမုတ်ဟုခေါ်သော ကျွန်း၌ရှိခဲ့သည်။ ငါသည် သခင့်နေ့၌ ဝိညာဉ်တော်၌ရှိ၏”
အချိန်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ - ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် အေဒီ ၉၀ ခန့်တွင် ရေးသားခဲ့ပြီး အခန်းငယ် ၁ တွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် “မကြာမီ ပေါ်ပေါက်လာမည့်အရာများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အခန်းငယ် ၃ တွင် “အချိန်ရောက်လုနီးပြီ” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အခန်းငယ် 19 သည် ဤနည်းဖြင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါ အချိန်ကာလကို ထပ်လောင်းရှင်းပြသည်– “သင်မြင်ဖူးသောအရာများ၊ ဖြစ်သောအရာများ၊ နောင်ကာလဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကို ရေးထားလော့။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် 21 ရာစုဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ပါရှိသောအရာ အများအပြားသည် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံး စီရင်ချက်ချရန် ရှိသေး၏။
နားလည်ရန် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် တစ်ခုလုံး လိုအပ်သည်။ အခန်းငယ် ၂ တွင် “ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏ သက်သေခံချက်ကို အဘယ်သူ မှတ်တမ်းတင်သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အငယ် ၁၀ မှ ၁၂ တွင် ယေရှုသည် ယောဟန်အားပြောသောအခါ ယေရှုသည် သူ့နောက်၌ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဂျွန်က သူ့ကိုကြည့်ဖို့ လှည့်ကြည့်ရတယ်။ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ၊ “မီးခွက်ခုနစ်လုံးအလယ်၌” ယေရှုသည် အတိတ်ကျမ်းစာသမိုင်း၏ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကွယ်တွင် ကြားရသောအသံသည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။
“ဤ​သို့​သော​လမ်း၊ ထို​လမ်း​သို့​လိုက်​လော့” ဟူ​၍ သင့်​နောက်​ဘက်​မှ​စ​ကား​တစ်​ခု​ကို ကြား​ရ​လိမ့်​မည်။—ဟေ​ရှာ​ယ 30:21
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုနားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆီမီးခုံအပါအဝင် သင်္ကေတများစွာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ရန် အတိတ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် (သို့) "ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ကွယ်တွင်" ကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၊ ကော ၂:၁၃)။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် သင်္ကေတအဓိပ္ပါယ်ကို ကျန်ကျမ်းစာများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ရှင်းပြသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ သင်္ကေတများကို စာသားအတိုင်း ဘာသာပြန်၍မရပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော သားရဲများနှင့် သတ္တဝါများသည် လူတို့၏စိတ်နှလုံးတွင် ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသည်- ပကတိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများမဟုတ်ပေ။ လူသန်းပေါင်းများစွာကို ဖျက်ဆီးရန် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပကတိ ကြီးမားသော သားရဲတစ်ကောင်မျှ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ဤသင်္ကေတများသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး၊ ထိုဝိညာဉ်ရေးအဓိပ္ပါယ်မှာ အထူးသဖြင့် “ဇာတိပကတိဖြစ်၍ ငါတို့တွင်နေ” သောနှုတ်ကပတ်တော်၏အကြောင်းအရာကို လိုအပ်သည် (ယောဟန် ၁:၁၄)။ ထို့ကြောင့် အခန်းငယ် ၂ တွင် “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်” ဖြစ်သည့် “ယေရှုခရစ်၏ သက်သေခံတော်မူချက်” (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၃) ကို ဖော်ပြထားသည်။ ဗျာဒိတ်သတင်းက ယေရှုကို ဖော်ပြတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ငါတို့အတွက်! စစ်မှန်သောယေရှု။ ယေရှုအကြောင်း လူအများသိကြသော်လည်း ယေရှု၏တည်ရှိခြင်းကို ၎င်းတို့အား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမျိုး တစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ။ စစ်မှန်သောယေရှုသည် သင့်ထံတော်မှ ကိုယ်တော်ကို ထုတ်ဖော်ပြသသောအခါ၊ သင်သည် မည်သည့်အခါမျှ မတူညီပါ။ သင်သည် သူ့အား စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့အစေခံရန် အပြစ်မှလွှဲရှောင်ရန် နောင်တအပြည့်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်း သို့မဟုတ် သင်ပို၍ခက်ခဲသော သင်၏အပြစ်ဆီသို့ ပြန်ပြေးသွားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသည်မှာ သင်သည် အပြစ်တရားသည် သင့်နှလုံးသားနှင့် အသက်တာတွင် လုပ်ဆောင်နေသေးသော်လည်း သင်သည် ကောင်းစွာခံစားနိုင်သည့် “ခရစ်ယာန်” ဘာသာတရားတစ်ခုကို ရှာဖွေရန် သင်ရှာဖွေနေပါသည်။
ဖတ်ရန်၊ နားလည်ရန်၊ ထိန်းသိမ်းထားရန် ရည်ရွယ်သည်။ အခန်းငယ် ၃ က ဤသို့ဆိုသည်– “ဖတ်ရှုသောသူနှင့် ဤပရောဖက်ပြုချက်စကားများကိုကြား၍ ရေးထားသမျှတို့ကို စောင့်ရှောက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို အပြည့်အဝဖတ်ရှုလေ့လာရန် အချိန်ယူရ၏။ သခင်ယေရှုဖော်ပြသောအရာကို ကြားနာနားလည်ရန် ဝိညာဉ်ရေးအရ နာခံသောနားတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပါတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို အမှန်တကယ် ဝိညာဉ်ရေးအရ နာခံလိမ့်မယ်။
သခင်ယေရှုထံမှ သူ၏အသင်းတော်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အခန်းငယ် ၄ တွင် “ယောဟန်သည် အသင်းတော်ခုနစ်ပါးဆီသို့” ဟုဆိုသည်။ အခန်းငယ် ၁၁ တွင် သခင်ယေရှုက ယောဟန်အား “သင်မြင်သောအရာကို စာအုပ်၌ရေးမှတ်၍ အသင်းတော်ခုနစ်ပါးထံသို့ ပေးပို့ပါ” အခန်းငယ် 20 တွင်၊ ယေရှုသည် “သင်မြင်ရသော မီးခွက်ခုနစ်လုံးသည် အသင်းတော်ခုနစ်ပါးဖြစ်သည်” ဟုယောဟန်အားဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု၏အသင်းတော်သည် စစ်မှန်သောကျေးကျွန်များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စတင်တွေ့မြင်လာရသည်။ ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် ယေရှုကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းသို့ မှောက်မှားသောကျွန်များနှင့် မှောက်မှားသောအသင်းတော်များဖြစ်မလာစေရန် အသင်းတော်အား သတိပေးရန်၊
သခင်ယေရှုသည် ဘုရင်များ၏ ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သခင်တို့၏ အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ - အပိုဒ်ငယ် ၄ တွင် သူသည် အမြဲရှိနေသည် ဟု ဖော်ပြသည်၊ အကြောင်းမူကား၊ သူသည် ဖြစ်၏၊ သူလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခန်းငယ် ၅ တွင် ယေရှုသည် မိမိကိုယ်မိမိ ဘုရင်အဖြစ် ထင်ရှားစေမည်– “ထိုအချိန်ကာလ၌ အဘယ်သူသည် မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ပြတော်မူလတံ့သော တမန်တော်ပေါလုနှင့် သဘောတူညီသော “ရှင်ဘုရင်မင်းများ” ဖြစ်သည်ကို အခန်းငယ် ၅ တွင် ဖော်ပြသည်။ တန်ခိုးရှင်ဘုရင်၊ သခင်တို့၏သခင်၊ ဤသည်ကိုလူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဆုံးစွန်သောအချက်အနေဖြင့်“ ရှင်ဘုရင်၊ အရှင်ထာဝရဘုရား” (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၆) အဖြစ် ရဲရင့်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ အခြားသော ဘုရင်များအားလုံးသည် သူ့အတွက် လက်အောက်ခံများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မနှောင်းမီတွင် မိမိကျွန်ဖြစ်ရန် နှိမ့်ချခြင်းခံရသည်။ ဘုရားသခင်သည် သတ်မှတ်၍ နှိမ့်ချတော်မူ၏။ သခင်ယေရှုကို ကိုးကွယ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သင်ကိုယ်တိုင်ရော၊ အသင်းတော်အတွက်ပါ အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရင်နှင့် သခင်အဖြစ် ဂုဏ်တင်ကာ ရိုသေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်ချစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သစ္စာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူ၏။ - ထို့ကြောင့် ဘုရင်အဖြစ် ချီးမြှောက်ခြင်းခံထိုက်ပေသည်။ အခန်းငယ် ၅ ၏ပထမအခန်းတွင် ယေရှုသည် “သစ္စာရှိသက်သေ၊ သေခြင်းမှအဦးဆုံးသားဖွားသော၊ မြေကြီးပေါ်ရှိဘုရင်တို့၏မင်းဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့ကိုချစ်၍ ငါတို့၏အပြစ်များကို သူ့အသွေးနှင့်ဆေးကြောတော်မူသောသူအား” သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ဗျာဒိတ်သတင်းစကားဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးပြီး ပြုပြင်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရပြီး မှန်ကန်ရန်လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို တုန်လှုပ်စေလောက်အောင် ချစ်သောကြောင့် ဤအရာကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ငါတို့ကို မဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး။
နားလည်ပြီး ကိုးကွယ်ဖို့လည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ ဝိညာဉ်တော် ရှိရမယ်။ အခန်းငယ် ၄ တွင် “ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ရှိသော ဝိညာဉ်တော်ခုနစ်ပါးမှ” ဖော်ပြထားသည်မှာ အသင်းတော်ခုနစ်ခုမှ တစ်ခုစီတွင် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး သတင်းစကားကို ကြားနာနားလည်နိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ အသင်းတော်တစ်ခုစီအား ယေရှု၏စကားအဆုံးတွင် ဤသဘောတူချက်ဖြင့် ယေရှုသည် တစ်ကြိမ်စီတိုင်းတွင် ဤတူညီသောစကားလုံးများဖြင့် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်။ “ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား မိန့်တော်မူသောစကားကို နားရှိသောသူသည် ကြားပါစေ။” ဝိညာဥ်ဆိုင်ရာအရာများကို ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် လိုအပ်သည်။
“သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ငါတို့အား ဘော်ပြတော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို စစ်ကြောတော်မူ၍၊ အကြောင်းမူကား၊ လူ၏အကြောင်းအရာကို အဘယ်သို့သိသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်မှတပါး အဘယ်သူကိုမျှမသိ။ ယခုတွင်၊ ငါတို့သည် လောကီဝိညာဉ်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို ခံရကြပြီ။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးဆောင်သော အရာများကို ငါတို့သိမည်အကြောင်း၊ လူ၏ဉာဏ်ပညာဖြင့် ဆုံးမဩဝါဒပေးသော စကားကို မဆိုဘဲ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ဇာတိပကတိလူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်၏ အရာတို့ကို မခံမယူ။ အကြောင်းမူကား၊ ၎င်းတို့သည် သူ့အတွက် မိုက်မဲခြင်း ဖြစ်သည်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ ပိုင်းခြား၍ သိနိုင်သောကြောင့်၊ (၁ကော ၃း၁၀-၁၄)
သင့်လျော်သော ဝိညာဉ်တော်၌ ရှိခိုးသောအခါ၊ သို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ မြင်နိုင်၊ ကြားနိုင်၊ နားလည်နိုင်၊ သတိပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ယောဟန်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို မည်သို့ခံယူနိုင်သနည်း၊ အကြောင်းမှာ အခန်းငယ် ၁၀ တွင် ယောဟန်က “သခင်ဘုရား၏နေ့၌ ငါသည် ဝိညာဉ်တော်၌ရှိ၏” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်ကို ကြား၍ မြင်သောအခါ၊ ယေရှုကို နှိမ့်ချနာခံ၊ ကြည်ညိုကိုးကွယ်သူတို့သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၏ ဝိညာဉ်တော်၌ရှိကြလိမ့်မည်—ယေရှုထုတ်ဖော်သောအခါ နားလည်လာလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုလဲ သခင်ယေရှုကြွလာ၍ သူ့ကိုယ်သူ ထုတ်ဖော်ပြသသည်။ – အခန်းငယ် ၇ တွင် ဤအရာကို သူမည်သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်– “ကြည့်လော့၊ သူသည် တိမ်များနှင့်အတူကြွလာ၏။ သူ့ကို ထိုးဖောက်သော သူတို့သည်လည်း မျက်စိနှင့် မြင်ကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးသား အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့သည် သူ့ကြောင့် ငိုကြွေးကြလိမ့်မည်။ ဒါတောင် အာမင်။” သူဝင်လာတဲ့ တိမ်တွေက သာမန်တိမ်တွေ မဟုတ်ဘူး။
“ထို့ကြောင့် ငါတို့သည်လည်း ကြီးစွာသော ကရုဏာဖြင့် ဝန်းရံခြင်းကို ခံရ၏။ တိမ်တိုက်အလေးချိန်ရှိသမျှတို့ကို ဘေးဖယ်ကြကုန်အံ့၊ ငါတို့ကို လွယ်လွယ်နှောင့်ယှက်သော ဒုစရိုက်အပြစ်သည် ငါတို့ရှေ့၌ ချမှတ်ထားသော အပြေးပြိုင်ပွဲကို စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ပြေးကြကုန်အံ့။ ရှေ့တော်၌ထားတော်မူသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့် အရှက်ကွဲခြင်းကို မထီမဲ့မြင်ပြု၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော် လက်ျာတော်ဘက်၌ ချထားတော်မူ၏။” (ဟေဗြဲ ၁၂:၁-၂)
“မိုဃ်းတိမ်” သည် ကျွန်များစုဝေးခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ သူတို့၏စိတ်နှလုံး၏ပလ္လင်ပေါ်တွင် ယေရှုကို ကိုးကွယ်ရန်၊ စစ်မှန်သောကျေးကျွန်များသည် တစ်ကိုယ်တည်း၊ အသင်းတော်တစ်ခု၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အစေခံအတုအယောင်များ သည် အစေခံအစစ်များအလယ်တွင်ရှိသော “သူ့ကြောင့် ငိုကြွေးမြည်တမ်း” ကြသည်။
သခင်ယေရှုက “အကြောင်းမူကား၊ ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ လူနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက်စုဝေးရာအရပ်၌ ငါရှိ၏” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၈:၂၀) ဤအရာသည် အချိန်ကုန်ရုံမျှသာမဟုတ်၊ အကြောင်းမှာ ယေရှုအား လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ မသတ်မီတွင်၊ ထိုအချိန်က ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးအား သူဤသို့ပြောခဲ့သည်– “နောင်အခါ လူသားသည် တန်ခိုး၏လက်ျာဘက်၌ ထိုင်နေသည်ကို သင်တို့မြင်ရလိမ့်မည်။ မိုဃ်းတိမ်၌ ကြွလာ၍၊ (မဿဲ ၂၆:၆၄) ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း မည်သို့မြင်သနည်း။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ပြီးနောက်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြွလာသောအခါ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်- ခရစ်ယာန်စစ်များသည် တစ်ကိုယ်တည်းအဖြစ်၊ အတူတကွဝတ်ပြုကြပြီး၊ ယေရှုသည် သူတို့အလယ်တွင် တန်ခိုးကြီး၍ စိတ်နှလုံး၏ပလ္လင်ပေါ်တွင် စိုးစံကြသည်ကို မြင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယာဘက်မှာ ယေရှုထိုင်နေတဲ့ “ကောင်းကင်တိမ်” တွေပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့် အခြားသောဂျူးတို့သည် ထိုအမှုကိုမြင်သောအခါ၊ ထိုကြောင့် စိတ်နှလုံး၌ ညှဉ်းဆဲခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ "သူတို့ ခွင်းသောသူလည်းဖြစ်သည်” (ဗျာဒိတ် ၁:၇) သည် အပြစ်ကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံစေခဲ့သော လူတိုင်းဖြစ်သော်လည်း၊ ယေရှုကိုအစေခံရန် နောင်တမရကြသေးပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံပြီးချိန်မှာ သူ့ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ Golgotha မှာရှိတဲ့ စစ်သားအနည်းငယ်တင်မကပါဘူး။ အသွေးတော်သွန်းခြင်းအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း လူအများက မိုဃ်းတိမ်၌မြင်၍ “ငိုကြွေး” ကြသည်။ သင့်အပြစ်အတွက် ကရုဏာပူဇော်သက္ကာအဖြစ် သူ၏အသွေးကို သင်လက်ခံသည်၊ သို့မဟုတ် ထိုသွေးသားအတွက် အပြစ်ရှိပါသလား။ ဤသည်မှာ ဓမ္မသစ် သွန်သင်ချက်မျှသာမဟုတ်၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်လည်း မှန်ကန်ပါသည်။
“ထာဝရဘုရား မိုဃ်းတိမ်၌ဆင်းသက်ထိုအရပ်၌ သူနှင့်အတူရပ်၍ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို ကြွေးကြော်လေ၏။ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည်​သူ​၏​ရှေ့​တော်​၌ ရှောက်​သွား​၍​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား၊ က​ရု​ဏာ​ကျေး​ဇူး​တင်​တော်​မူ​သော​အ​ရှင်​ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား၊ က​ရု​ဏာ​ကျေး​ဇူး​တင်​၍​ကောင်း​မြတ်​ခြင်း​နှင့် သစ္စာ​နှင့်​ပြည့်​စုံ​သော​အ​ရာ၊ အ​ထောင်​အ​သောင်း​တို့​အား က​ရု​ဏာ​စောင့်​ထိန်း​ခြင်း၊ ဒု​စ​ရိုက်​အ​ပြစ်​များ​ကို​ခွင့်​လွှတ်​တော်​မူ​သည်​ဟု မိန့်​တော်​မူ​၏။ အပြစ်ရှိသူကို မည်သို့မျှ ရှင်းလင်းမည်မဟုတ်ပေ။; သားသမီးတို့အပေါ်၌ ဘိုးဘေးတို့၏ ဒုစရိုက်ကို၎င်း၊ သားသမီးတို့၌၎င်း၊ တတိယမျိုးဆက်နှင့် စတုတ္ထမျိုးဆက်တိုင်အောင်၎င်း၊ (ထွက်မြောက်ရာ ၃၄:၅-၇)
သက်သေများ၏ တိမ်ထဲတွင်၊ ယေရှုကို လက်ခံမည့်သူများ အတွက် သခင်၏ ကြီးမားသော ကရုဏာတော် သက်သေ ရှိပါသည်။ ငြင်းပယ်သောသူတို့မူကား၊ မိမိတို့အပြစ်ကြောင့် အပြစ်ရှိကြပြီ။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်သည် “အပြစ်ရှိသူများကို မည်သို့မျှ ရှင်းပစ်မည်မဟုတ်” သေးပေ။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအတွက် တစ်ခုတည်းသော ယဇ်အဖြစ် ပေးဆောင်ထားပြီး၊ လက်ခံမည် ဖြစ်သည်။ သားတော်ကို ငြင်းပယ်ပြီး သစ္စာရှိကျေးကျွန်မဖြစ်ပါက၊ အပြစ်သည် သင့်စိတ်နှလုံးနှင့် အသက်တာတွင် လုပ်ဆောင်နေသေးကြောင်းနှင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် သင်သည် အပြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သင့်ကိုယ်သင် သိပါသည်။
နားလည်မှုအတွက် သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာသည် အရေးကြီးပါသည်။ စာတန်၏အကူအညီဖြင့်၊ ဘာသာရေးသမားသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏သားတော်ယေရှု၊ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၊ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အစီအစဉ်၊ သူ၏အသင်းတော်နှင့် သူ၏ဗျာဒိတ်သတင်းနှင့်ပတ်သက်သော အမှန်တရားကို လုံးလုံးလျားလျား ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ သို့သော် ရှုပ်ထွေးသောဘာသာတရားရှိ လူအများစုပင်လျှင် ဤအချက်ကို သဘောတူကြလိမ့်မည်- ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှုပ်ထွေးနေသော လေထုသည် လုံးဝကင်းစင်ပါသည်။ ကောင်းကင်တွင် ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်တစ်ဆူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး၊ ဘုရင်တစ်ပါး၊ သစ္စာတရားတစ်ခု၊ အယူဝါဒတစ်ခု၊ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် အသင်းတော်တစ်ဆူဖြစ်သည်။ မင်းဘာလို့မေးနိုင်တာလဲ။ ဘုရားသခင်သည် မရှုပ်ထွေးသောကြောင့်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်သွားလျှင် မည်သည့်လူကိုမျှ ဇဝေဇဝါဖြစ်ခွင့် မတွေ့ရတော့ပေ။ အကြောင်းမှာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသခင်သည် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး အခြားလူတိုင်းက သူ့ကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးမှုမရှိတဲ့ နေရာတွေရှိတယ်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်တွင် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်အစစ်တို့သည် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လျက်၊ နာခံလျက်၊ စိတ်နှလုံးပလ္လင်တော်မှ ကိုယ်တော်ကို ကြည်ညိုကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ဤနေရာကို “ကောင်းကင်ဘုံ” ဟုခေါ်တွင်သည်– “ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောအသင်းတော်တစ်ဆူကဲ့သို့ အပြစ်တရားမှ ကယ်တင်ခံရပြီး သမ္မာတရား၌ အတူတကွထိုင်ကာ သဘောတူညီခဲ့ကြသည်– “ငါတို့ကို တညီတညွတ်တည်း ထမြောက်စေ၍၊ ကောင်းကင်ဘုံ ယေရှုခရစ်၌” (ဧဖက် ၂း၆)။
“ဘုန်းကြီးတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့အား ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ၊ ဗျာဒိတ်တော် ဥာဏ်မျက်စိသည် လင်းလျက်ရှိ၏။ ပဌနာတော်၏မျှော်လင့်ချက်ကား အဘယ်နည်း၊ သန့်ရှင်းသူတို့၌ အမွေခံရသော ဘုန်းအသရေနှင့် အဘယ်သို့သော စည်းစိမ်ရှိသနည်း၊၊ ယုံကြည်သောသူတို့၌ ငါတို့၌ အလွန်ကြီးမြတ်သောတန်ခိုးတော်ကား အဘယ်နည်းဟူမူကား၊ ခရစ်တော်၌ ပြုတော်မူသော၊ သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသောအခါ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ မိမိလက်ယာဘက်၌ ထားတော်မူ၍၊ ဤလောက၌သာ၊ နောင်ဖြစ်လတံ့သော အရာတို့၌လည်း၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ၏ခြေအောက်၌ ချထားတော်မူပြီ။ အသင်းတော်၌ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှါ၊ သူ၏ကိုယ်တည်းဟူသော၊” (ဧဖက် ၁:၁၇-၂၃)
ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် ယေရှု၏ “ပြည့်စုံခြင်း” ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကွဲပြားခြင်း၊ အယူဝါဒပေါင်းစုံ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း မရှိပါ။ မေးခွန်းက နင်လား?
ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို နားလည်ရန် သင့်တွင် သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာရှိပါသလား။ မဟုတ်ပါက၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်ရန် သင့်ကိုယ်သင် အပြည့်အဝနှိမ့်ချသည်အထိ နားလည်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူ၏ကျွန်များ၊ သူ၏အသင်းတော်၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်နှင့်အတူ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်နာခံပါ။